Ọ ga-abụ na ihe Jizọs zara ya tụrụ ya n’anya. Jizọs sịrị ya: “Lawa, nwa gị agbakeela.” (Jọn 4:50) Nwoke ahụ kwetara ihe Jizọs kwuru ma lawa. Mgbe ọ na-ala, ya na ndị odibo ya zuru n’ụzọ. Ha gba na-abịa ka ha kọọrọ ya ihe ọma merenụ. Ha kọọrọ ya na nwa ya agbakeela. Nwoke ahụ chọrọ ịma mgbe o mere. Ọ jụrụ ha, sị: ‘Ole mgbe ọ gbakere.’